- စစ်တပ် သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေတွေပေါ်မှာ လယ်သမား ၃ဝဝ ကျော် ထွန်ယက် click
- လက်ပံတောင်းအရေးဆောင်ရွက်သူ ၁၅ ဦး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရ click
- PNO ပအိုဝ်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဒေသခံတောင်သူများ (ရုပ်သံ) click
- လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်က ဆန္ဒပြပွဲတချို့ ပြေလည်မှုရရှိ click
- ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ မကြာခင် ထပ်မံကျင်းပမည် click
- ပုရိန်ရွာမှာ ရဲက ပစ်ခတ်လို့ ၃ ယောက် သေဆုံး click
- ပုရိန်ကုန်းရွာ အဓိကရုဏ်းမှာ လူ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- လုံခြုံရေးတပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအတွင်း ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီး ၃ ဦး သေဆုံး click
- မလေးရှားမှာ မြန်မာတွေကို ရဲတွေ လိုက်လံ ဖမ်းဆီး click
- မလေးရှားရဲ မြန်မာ ၅၀၀ ခန့်ကို ဖမ်းဆီး click
- ကလေးနှစ်ယောက်နှုန်း ကန့်သတ်မိန့် ပြည်နယ်အနှံ့ ပြဌာန်းဖို့ တောင်းဆို click
- စစ်တွေမြို့က ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားဥပဒေအရ အားလုံး တန်းတူဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောကြား click
- တရားဥပဒေအရ အားလုံးတန်းတူဖြစ်ရမယ် (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- PR အတွက် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပြင်ဆင် click
- လူငယ်တွေ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကျဆင်းမှု ကိုမင်းကိုနိုင် စိုးရိမ် click
- အမေရိကန်ရောက် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးတို့ NED ၏ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ တက်ရောက် click
- NED အဖွဲ့က ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဒီမိုကရေစီဆု ပေးအပ် click
- ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစု တွေ့ဆုံပွဲ - အပိုင်း ၁ (ရုပ်သံ) click
- ကိုကိုကြီးနဲ့ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစု တွေ့ဆုံပွဲ - အပိုင်း ၂ (ရုပ်သံ) click
- အမေရိကန်ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အထူးခံစားခွင့်ရဖို့ မြန်မာ မျှော်လင့် click
- မြန်မာပြည် GSP ကုန်သွယ်ရေး အထူးခံစားခွင့် (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Madeleine Albright (ရုပ်သံ) click
- ကြာသာပတေးနေ့ မြန်မာတီဗွီသတင်း (ရုပ်သံ) click
- မတူကွဲပြားမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေး click
- ဦးသိန်းစိန်၏ ရေဒီယိုစကား မုသား ... မယုံလေနဲ့ သတိထား (ဆောင်းပါး) click
- ၂၀၁၃ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးညီလာခံ နေပြည်တော်မှာ စတင် click
- နေပြည်တော် WEF စီးပွားရေးညီလာခံ (ရုပ်သံ) click
- WEF စီးပွားရေးညီလာခံနဲ့ မျှော်လင့်ချက် (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာ့စီးပွားရေး ၂၀၃၀ မှာ ၄ ဆ တိုးလာမလား (စီးပွားရေးသုံးသပ်ချက်) click
- မြန်မာ့စီးပွားရေးကို IFC အကောင်းမြင် click
- မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို click
- ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားစီမံကိန်းသစ် မြန်မာအစိုးရ ကြေညာ click
- အေဒီဘီက မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကူမယ် click
- မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းသည် ဒုက္ခသည်ကို အလိုမရှိ click
- နာတာရှည်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး click
- ပန်းချီဦးဝင်းဖေနဲ့ ပန်းချီဦးစိန်မြင့် (ရုပ်သံ) click
- ဆူပူ မီးထိုး ကြံ့ဖွတ်အကျိုး (ကာတွန်း) click
- ကုလသံအမတ် Rice ကို အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး ခန့်အပ်မည် click
- ဆီးရီးယားအစိုးရတပ် သူပုန်တွေကို အပြတ်ချေမှုန်းမယ်လို့ ကြေညာ click
- ကူဆဲမြို့ကို ဆီးရီးယားစစ်တပ် ပြန်သိမ်း click
- ကင်ညာကို ဗြိတိသျှ နစ်နာကြေးပေးမယ် click
- Nawaz Sharif ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာဆို click
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အထည်စက်ရုံလုပ်သားတွေ သောက်ရေမသန့်လို့ ဒုက္ခရောက် click
- ကလေးသေဆုံးမှုနဲ့ အာဟာရပြဿနာ click
လက်ပံတောင်းတောင် ပဋိပက္ခ ဟာ စစ်အာဏာရှင် (ယနေ.တိုင်ရှိဆဲ) ယန္တရား
အာခံဆန်.ကျင်မှု ဖြစ်ပါတယ် ၊ အင်အားချိန်ခွင်ရှာ ကတော.
အမှန်ကို မပြောဝင်.၊ မဝေဖန်ဝင်.ကြသူတွေလည်းအတော်ရှိ
အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှု မပြုဖို. မျှော်လင်.ပါတယ် ။